၁၈ နှစ် - Femdom သန္ဓေသားနွမ်းပါးမှု (အစပျိုးမှုသတိပေးချက်) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ကနေ
အသက် ၁၈ - အမျိုးသမီးများအတွက်သန္ဓေသားလောင်းပုပ်ခြင်း (သတိပေးချက်)
POST တွင် BIG TRIGGERS အချို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံး porn နှင့်ကြည့်ရှုခြင်းမှစတင်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကကဲ့သို့အမျိုးသမီးများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငါစွဲလမ်းတယ် ထိုအခါငါသည်လည်းအရူးဖြစ်၏။
My self-ယုံကြည်မှုနှင့် Self-တန်ဖိုးရှိစာရှောင်မြန်နှုန်းနဲ့တောင်ကုန်းမှဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ငါက porn ထံမှခဲ့သတိထားမိကြဘူးဒါကြောင့်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူဒါမျက်စိကန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစာသားငါ့ထံမှငါ့အသက်ကိုစို့နှင့်ဝက်ဖုတ်ကောင်, ဝက်ကျွန်ငါ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်တစ်နည်းနည်းနဲ့ nofap အကြောင်းကိုထွက်ရှာပါ။
ငါကရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါနှင့်အတူကပ်ဖို့ကြိုးစားပါနှင့်ငါ့ P ကိုခရီးစဉ်တွင်မတှေ့နိုငျသောအခြားအခြားကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှာပါ။ သင်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့။ ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူး ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာပျက်ကွက် ငါ NoFap ကိုအပြစ်တင်ပြီးဂူဂဲလ်ကို "nofap is bullshit" or "nofap si placebo" အတွက်ရှာဖွေတာတစ်ကြိမ်ပဲ။ ငါဘယ်ကို ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။
ခဏတစ်နောက်မှငါတကယ်ငါ fuck ဆိုတဲ့ femdom ဖို့အချိန်အများစုကိုငါ့အတွေးနှင့် FAP မီနှင့်အပြီးခံစားချက်တွေကိုအပြည့်အဝလေးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်းများရှိလူအပေါင်းတို့သည် relapsing ငြီးငွေ့ရ။
ငါတဦးတည်းအချိန်တစ် fuck ဆိုတဲ့အိမ်သာကျွန်အဖြစ်အစေခံလိုသောငြီးငွေ့တယ်, ငါ့အခြို့သောယုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဘောလုံးမှကန်ရလိမ့်မည်။ ဒါဟာတကယ်တက် fucked ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကငျြတယျ။ ငါအိုင်တီချင်တယ်။ ငါအရာတိုင်းကိုငါသူမကချက်ချင်းငါ့အဘို့ dominatrix ခဲ့သည်ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုငါမြင်၏နဲ့ကျွန်မဘယ်လိုသူမကငါ့ဦးခေါင်းအတွင်းကြည့်ရှုစတင်ခဲ့သည့်အခါနေ့စဉ် interaction ကအပေါ်နေ့စဉ်ဘဝတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုထားလို့ပြောအဖြစ် femdom porn wich မှ masturbate မှလွဲပြီးအတွက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်တခြားဘာမျှမရှိခဲ့သည် ငါ့ကိုစိုးမိုးနိုင်ပါ။ ထိုအသင်သည်အဘယ်အရာကိုသိသလော ငါမအမျိုးသမီးတစ်ဦးငါ့ကိုချင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကမိန်းကလေးငါ့အဘောလုံးမှငါ့ကိုမရှုပ်နေခဲ့သည်ငါ့နှုတ်၌နှင့်အခြားလက်နှင့်အတူ piss ဖို့လိုတဲ့အခါငါဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုအခါငါခွေးအကြောင်းပြောနေတာတောင်မှကြီးလေးသောပြwasနာဖြစ်ခဲ့သည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကသူတို့ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုခွေးတွေအကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီ၊ ငါသိတယ်၊ ငါခေါင်းထဲမှာခွေးပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မကိုသခင်ယေရှုကို fuck ဆိုတဲ့ခွေးလိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ တစ်ခါတလေငါပြန်ပြီးပြန်ပြောမိတဲ့အခါငါက fuck ဆိုတဲ့ခွေးတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ငါရူးနေတာလားငါမပြောခဲ့ဘူးလား ငါအလွယ်တကူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခငျသညျသို့မဟုတ်ငါ့ကို dominatrix နှင့်အတူစစ်မှန်သောအစည်းအဝေးနှင့်အတူပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ပင်အချိန်ဖြုန်းခွင့်မပြုများအတွက်အကြင်သူသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်ငါ့ကိုတစ် ဦး fuck ဆိုတဲ့ 24/7 ကျွန်ဖြစ်ခွင့်မပြုပါ။ ဟာသေပြီ။ သို့မဟုတ်ငါ့ကိုအနီးကပ် fuck ဆိုတဲ့ခဲ့အကြောင်းမရှိအချို့ chastity ခါးပတ်ကိုဝယ်ခွင့်မပြု။ ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး။ shit အပြည့်အဝကြီးမားတဲ့အပေါက်၌တည်၏။ ဒါပေမယ့်ပေါ့သွားတာကတော့တစ်ခါတလေဒီအရုပ်ဆိုးတဲ့ရောဂါပြန်ဖြစ်တာနဲ့ငါလိင်တံသွေးထွက်တာမဖြစ်မချင်းတစ်နေ့ကို ၈ ကြိမ်လောက်တီးတတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဟာသေပြီ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ချက်ဆောင်ကြဉ်းသောအစအဦးမှာပါဟုဆိုသည်။ ငါမကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာငါ့အနည်းနည်းအလင်းအချိန်လေးအတွင်းမှာအလေ့အကျင့်တရားအားထုတ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ငါကအတော်လေးအများကြီးကျင့်သုံး။ ဘာဝနာထိုင်ရင်း, ဒီမှာငါထွက်တွေ့ရှိခဲ့ရာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့တဖန်ငါ့စိတ်ထဲနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ငါ့ကိုပြောပြခဲ့ရာလိုပဲ။ ကျွန်ဖြစ်ငါ့စစ်မှန်တဲ့သဘောသဘာတူငါခံစားခဲ့သည်။ လကျအောကျခံဖြစ်စေရန်။ ထိုအခါမှသာနာကျင်မှုကလက်ခံမပေးရာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့အကြိမ်တွေအများကြီးငါက fuck ဆိုတဲ့နှင့် 8 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် masturbate ကဆိုသည်။ ဦးနှောက် Thanx!
ကောင်းပြီ .. ဒီအတွေးကိုပြန်ငါ့ထံသို့လာမယ့်စောင့်ရှောက်လော့။ နောက်ဆုံးမှာငါနီးပါးတိုင်းငါထိုအချိန်တွင်ထိုအတွေးအဘို့အဘယ်သူမျှမရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့အကြောင်းမရှိပြန်သွားကြသည်။
ငါအရှိဆုံးကြောင့်လိုအပ်တဲ့အခါငါ့ကိုအလင်းကိုပြဆိုနိုင်တူသောငါ yourbrainonporn နှင့်ပေါ်ဆောင်းပါးရှောင်ငါ၏အခံစားနေရပြီးပထမအပတ်အတွက်အပူတပြင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါအထက်တွင်ပြောသကဲ့သို့သူနှင့်တူအလားတူပြproblemsနာများနှင့်အတူဤကောင်လေးရှိ၏ “ အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်နေတိုင်းကျွန်မကကျွန်ဖြစ်ချင်တယ် (ဒါမှမဟုတ် domatrix လိုပဲဖြစ်ချင်တာပဲ) ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေတပ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါ့ကိုရွံရှာတယ်။ ဒါဆိုငါလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုမကြိုက်ဘူး”
ငါ့ကိုမြင်ရတပြင်လုံးကိုအချိန် don't အတိအကျတူညီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာရှိနေတတ်တယ်လိုပဲငါ့အဦးနှောက်ကယ့်ကိုအားဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်နည်းနည်းမတ် motherfucker ငါ၏အအားနည်းအမှတ် that's အတိအကျသိတယ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာ relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုရောက်လာပါတယ်။
ပြီးတော့“ မိန်းမကိုနှစ်သက်တဲ့သူကိုမစီရင်ပါနဲ့” လို့မပြောပါနဲ့။ သူမကိုဘယ်သူမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ သူကသဘာဝနဲ့မင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးလက်ဆောင်ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်၊ ​​OSHO ပြောတာကလွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်။
ဒါနဲ့ထို့နောက် masturbate ငါ၏အဘောလုံးသို့အကြှနျုပျနှငျ့အသက်တော်၌ နေ. သောနောက်ဆုံးအစွမ်းသတ္တိကိုဖမ်းပြီးနှင့်ငါ့အစီအစဉ် 14 ရက်ပေါင်းငါ့ခရီးနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားရ။ (လိင်အဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှုရေတွက် doesnt လည်းငါကတူခံစားမိတဲ့အခါမှသာတိုင်း 14 ရက်ပေါင်း masturbate ဖို့လိုအပ် dont ။ )
ဒါပေမယ့်အခုငါနှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးစဉ်ကတည်းက 30 ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါသောယခုပြီးတော့ငါနေဆဲအစွန်းများကဲ့သို့လွယ်ကူသော fuck ဆိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ငါကရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေငါပြောနိုင်ပါသည်။ Don't ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်။ ငါနေဆဲတခါတရံ fuck ဆိုတဲ့အမြင်ပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ် femdom နှင့်ဆက်စပ်သော fuck ဆိုတဲ့စာသားကိုပေမယ်သင်သည်အဘယ်အရာကိုသိသလော က fuck ဆိုတဲ့။ Don't ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်။ ငါခက်ခဲအစစ်အမှန်များကဲ့သို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်လျှင်ကောင်းသောအရာအကြောင်းမရှိ that's ထို့နောက် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့…ဒီအတွေးတွေ၊ ဒီပုံပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကနေ့စဉ်အားနည်းနေတယ်၊ ​​တစ်ခါတစ်လေမှာခက်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာလွယ်ကူတယ်၊ သို့သော်သင်ကငရဲသို့သွားလျှင် Winston Churchill ပြောသည့်အတိုင်းဆက်လုပ်ပါ။
ပြီးတော့…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုက Eve ၀ ရက်တောင်ကိုရောက်နေပြီ။ ငါနေ့စဉ်အသစ်သော shit အသစ်နှင့်ငါ့ဘဝ၌ဖြစ်ပျက်သောကြီးစွာသောအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုလေ့လာနေသည်။ သေချာတာပေါ့အဲဒီဝမ်းနည်းဖွယ်အချိန်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမယ့် fuck ဆိုတဲ့။ ဒါဟာအားလုံးဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်ထွက်တက်နိုင်ပါတယ် shit ၏သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုံ၌ရှိကြ၏နဲ့ကျွန်မလူတိုင်း shit ဘယ်လောက်မှောင်မိုက်အရေးမတခါပိုပြီးအလင်းတွေ့နိုင်ပါသည်သေချာဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုနက်ရှိုင်းဒီတော့နေပါစေ။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထိုအခါငါဘယ်လိုရွေးချယ်သူကိုငါကိုပြောင်းလဲ (သို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ) ဦးမည်မှနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့် cant?
အဆိုပါ bullshit အတှေးအ Accept, ခံစားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုသူတို့နှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းပေမယ့်ဖြစ်စေသူတို့အပေါ်မှာလုပ်ရပ် don't don't ။ သို့သော်သင်သည်ထိုသူတို့တက်ပုလင်းသွပ်မနေတဲ့လမ်းကိုရှာဖွေရပေမည်။ ဒီတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိပါတယ်။ ထိုအသင်တဦးတည်းကအကောင်းဆုံးဝတ်စုံအရာကိုသင်ရှာတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ငါ့အဘို့က Dynamic ဘာဝနာများနှင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေသူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ်။ အကအခုန်, ကဗျာ, သီချင်းဆိုရေးသားခြင်း, အော်ဟစ်။ ဒါ့အပြင်အားကစားကစားခြင်း။ က that's ဒါ။
စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြောင့်ကိုငါ့အူထဲက get နဲ့ကျွန်မလူအခြို့ကူညီစေခြင်းငှါ, တူသောငါခံစားရတယ်။
LINK - Femdom ပြီးတော့အားလုံး Porn စွဲသည်အစစ်အမှန်မြျှောလငျ့